Best New Fashion Robot Milk Tea Kiosk Ho an'ny Fampiharana An-trano Toerana Mpanamboatra sy Orinasa | Moton
Laharana modely: MTD031A
Robot ronono dite kiosk MTD031A dia tena fitaovana amin'ny malaza fiaraha-miasa robot sandry sy ranomandry dispenser. Ny vatan'ny kiosk dia mampiasa ny rafitra vy miaraka amin'ny fitaovana Q235B. Izy io dia manome fomba fifandraisana tambajotra telo, dia ny 4G, WIFI ary Ethernet. Ny famatsiana rano dia avy amin'ny rano barika galona fa tsy rano paompy. Ny famenoana fitaovana dia mety indray mandeha isan'andro, izay miankina amin'ny fanamafisana sy ny fanjifana tena izy.
Ny fiasan'ny kiosk dite ronono robot
• IOS sy Android fampiharana manafatra an-tserasera.
• Fanaovana zava-pisotro malefaka ataon'ny sandry robot miara-miasa ho azy.
• Famandrihana mialoha amin'ny Internet
• Fifandraisana amin'ny fahitana (famantarana ny hazavana) sy ny fifandraisana amin'ny feo
• Kiosk manodidina ny fanaraha-maso ara-potoana amin'ny alalan'ny fakan-tsary.
• Toeram-pitaovana anatiny ao anaty kiosk amin'ny dite ronono fanaraha-maso sy fanairana fahadisoana.
• rafitra fitantanana fandidiana mifototra amin'ny Android.
Parameter amin'ny kiosk dite ronono robot
Hery napetraka 6250W
refy (WxHxD) 1800x2400x2100mm
Fotoana fanaovana fisotroana antonony 80 segondra
Kaopy ambony indrindra (indray mandeha amin'ny sakafo) 200 kaopy
Isan'ny fantsona famatsian-drano 8
Isan'ny fantsona ho an'ny fitohanan'ny voankazo 4
Isan'ny fantsona ho an'ny famatsiana manandevo mafy 3
Fomba fandoavam-bola WeChat mandoa sy Alipay
● Fahadiovana sy fiarovana
● tsiron-tsakafo maromaro
teo aloha: 2022 Ozinina fahatongavana vaovao mivantana fivarotana kafe mini robot kiosk
Manaraka: Fivarotana Teapresso Robot Fitaovana mandeha ho azy tanteraka
China Robot Milk Tea Kiosk
Kiosk Dite Ronono Intelligent Robot